Dowladda Turkiga oo taageertay go’aanka Golaha Shacabka | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda Turkiga oo taageertay go’aanka Golaha Shacabka
Dowladda Turkiga oo taageertay go’aanka Golaha Shacabka
“Waxaan soo dhaweynaynaa go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya uu maanta qaatay, kaasoo ayidsan yihiin in sida ugu dhakhsiyaha badan loo qabto doorashada, iyadoo lagu saleynayo heshiiskii 17-kii September.” Ayaa lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga.
Warka ayaa lagu yiri “Waxaan rajeynaynaa in horumarkan uu u adeegi doono dib u bilaabidda wadahadalada wax ku oolka ah ee Daneeye-yaasha Siyaasadda, dib u dhac la’aan iyo in la xaqiijiyo horumarka is afgaradka ee bulshada, iyada oo laga gudbayo khilaafaadka.”
“Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa in Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu qaato doorkiisa hirgelinta doorashooyinka Somaliya, oo ay tahay in sida ugu dhakhsiyaha badan loo qabto.” Ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay barta Safaaradda Mareykanka ee Somaliya ku leedahay Twitter-ka.
Sidoo kale Wakiilka Midowga Yurub ee Somaliya, Amb. Nicolas Berlanga ayaa sheegay in Midowga Yurub uu soo dhaweynayo go’aanka Golaha Shacabka iyo baaqa Madaxweynaha
“Midowga Yurub wuxuu soo dhaweynayaa go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Somaliya iyo ku dhawaaqidda Madaxweyne Farmaajo. Hadda waa inaanan wax shuruud horudhac ah lagu xirin wadahadalada. Ra’iisal Wasaare Rooble waa inuu ku tiirsanaadaa taageerada wax ku oolka ah ee dhammaan Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada iyo Danleyda Siyaasadda ee geddi-socodka ay Soomaalidu hoggaaminayso.” Ayuu yiri Wakiilka oo warkan ku sheegay bartiisa Twitter-ka.
Madaxweynaha Somaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta hortagay Xildhibaanada Golaha Sacabka ayaa ka codsaday inay baabi’iyaan qaraarkii, ay 12-kii bishii April ku ansixiyeen labada sano ee loogu kordhiyay Hay’adaha Dowladda Federaalka, isla-markaana ay ogolaadaan in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September.
140 Xildhibaan ayaa ahaa ugu codeysay in dib loogu laabto heshiiskii 17-kii September ee ku qotamay qaabka doorasho ee dalka.
Previous articleRooble “Waxaan soo bandhigi doonnaa qorsheyaasha doorashooyinka”
Next articleJubbaland oo sheegtay in Madaxweyne Farmaajo la yimid siyaasad gacan laaban